ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အသက်ရှုစက်ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်စု - YOYARLAY Digital Media and News
လက်ရှိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကြောင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေ လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် လူတော်တော်များများဟာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် ဖန်တီးပေးနေကြပါတယ်။ အခုလည်း အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံက ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်စုက ကားပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အသက်ရှုစက်ပြုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဆိုမာရာ ဖာရိုချီနဲ့ အခြားဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး(၄) ဦးတို့ဟာ သူ့ဖခင်ရဲ့ ကားက မလိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ယူပြီး ကားဝပ်ရှော့ကို သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မြို့မှာ lockdown ချထားတဲ့အတွက် ရဲတွေရှိတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ဖို့အတွက် လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေကို ရွေးပြီး အလုပ်ဝပ်ရှော့ကို သွားကြပါတယ်။
သူတို့တွေက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဆုရ Robotics Team ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အသက်ရှုစက်ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကိ ကူညီပေးဖို့ အသက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်နေတာလို့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတွေက ဆိုပါတယ်။ “ကျွန်မတို့ရဲ့စက်နဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်နိုင်ခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ ဂုဏ်ယူမိမှာပါ” လို့ ဖာရိုချီက ပြောပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ မိန်းကလေးတွေကို ကျောင်းတက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဖာရိုချီရဲ့မိခင်လည်း (၃) တန်းနဲ့ ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေကို ကျောင်းတက်ခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့က ရုန်းကန်နေရတုန်းပါပဲ။ အခု အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်မိန်းကလေးတွေက အဲဒီအတွက် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဖာရိုချီက “ကျွန်မတို့က မျိုးဆက်သစ်တွေပါ။ လူတွေအတွက် တွန်းလှန်ပြီး အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ မိန်းကလေး၊ ယောကျာ်းလေးဆိုတာက ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်က လက်ဗလာနီးပါးနဲ့ ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ လူဦးရေ (၃၆.၆) သန်းအတွက် အသက်ရှုစက် (၄၀၀) နီးပါးပဲရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ သေဆုံးသူ (၃၀) နဲ့ ကူးစက်ခံသူ (၉၀၀) ကျော်ရှိနေပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်အတွက် အသက်ရှုစက်များများလိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖာရိုချီနဲ့ သူ့အဖွဲ့သားတွေက ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖာရိုချီတို့ရဲ့ အလုပ်ရုံးခန်းက Herat မြို့မှာ ရှိပြီး အဲဒီမှာ နေထိုင်သူတွေကို အရေးကြီးကိစ္စရှိမှသာ အိမ်ကနေ ထွက်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖာရိုချီရဲ့ဖခင်က ရဲတွေစစ်ဆေးလို့ရတဲ့လမ်းတွေကို ရှောင်ပြီး သူတို့ကို လိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်မတို့တွေက လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။ လူတွေရဲ့အသက်ကို ကယ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်” လို့ ဖာရိုချီက ပြောပါတယ်။
ဝပ်ရှော့မှာ ဖာရိုချီတို့က ဒီဇိုင်းနှစ်မျိုးနဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေက Toyotaကားရဲ့ ဝိုက်ဘာ၊ ဘတ္တရီ၊ အောက်စီဂျင်ပိုက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ စက်ပြင်ဆရာအဖွဲ့ကလည်း အသက်ရှုစက်ရဲ့အောက်ခံကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် သူတို့ကို ကူညီပေးပါတယ်။ အစွမ်းအစရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာပေးနေတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ရိုရာ မက်ချ်ဘူက ဖာရိုချီတို့အဖွဲ့ဟာ အသက်ရှုစက်ပြုလုပ်မှုကို မေ (သို့) ဇွန်လမှာ ပြီးစီးမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အသက်ရှုစက်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ အရင်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေမှာ စမ်းဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမဆုံး World Robort Olympaid ပြိုင်ပွဲမှာ ဖာရိုချီက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက သူနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေက အသက်ရှုစက်တွေကို လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ “ဒီကပ်ရောဂါကြီးကနေ အာဖဂန်နစ္စတန်လူမျိုးတွေက အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကူညီပေးတဲ့သူဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို စောင့်ဆိုင်းမနေသင့်ပါဘူး” လို့ ဖာရိုချီက ဆိုပါတယ်။
Ref: Ventilator from old car parts? Afghan girls pursue prototype.
Previous Previous post: လက်ပြတ်ဆိုတာ
Next Next post: မန်ကျည်းသီး
Upskirting အပြုအမူကို အင်္ဂလန်နဲ့ ဝေးလ်စ်နိုင်ငံတွေမှာ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်စီစဉ်
Upskirting ဆိုတာက တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အဝတ်အစားအောက်ကနေ ပင့်ပြီး ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုခိုးရိုက်တဲ့အပြုအမူကိုဆိုလိုတာပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီအပြုအမူကို အမျိုးသမီးတွေက ပစ်မှတ်ထားပြီးပြုမူခံရလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ အင်္ဂလန်နဲ့ ဝေးလ်စ်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုပြုမူခဲ့ရင် ထောင် ၂ နှစ်ကျနိုင်မယ့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲပြဌာန်းသွားတော့မယ်လို့…
Published: January 17, 20194:41 am Updated: March 23, 20195:59 am
Published: February 7, 20205:40 pm Updated: February 8, 202012:55 am